Umbuzo ngozoba yiphini likaCR | Isolezwe
Umbuzo ngozoba yiphini likaCR
Izindaba / 15 February 2018, 11:15am / MHLENGI SHANGASE
UDK. Nkosazana Dlamini-Zuma, uMnuz David Mabuza noNkk Lindiwe Sisulu ababalwe nokungenzeka babe yiPhini likaMengameli.
UMBUZO osezingqondweni zabantu ngukuthi ngabe ngubani ozoba yiphini likamengameli wezwe uma uMnuz Cyril Ramaphosa, umengameli we-ANC, esefungiswe njengomengameli wezwe.
Maningi amagama aseke aphakanyiswa ukuthi angavala isikhala esizoshiywa nguRamaphosa, oyiphini likamengameli wezwe.
UMnuz David Mabuza, iphini likamengameli we-ANC, kuthiwa wathi akathandisisi ukujutshelwa kwesokuba yiphini likamengameli wezwe.
Phakathi kwamagama ake avela elikaNksz Lindiwe Sisulu, obesohlwini lukaRamaphosa njengoba ebegaqele esokuba yiphini likamengameli we-ANC ngesikhathi kuyiwa engqungqutheleni ye-ANC eNasrec ngoDisemba nyakenye.
Omunye okuke kwavela igama lakhe nguNkk Naledi Pandor, uRamaphosa amemezela ukuthi ungomunye wabantu abazoba yiphini likamengameli ngesikhathi kukhankaswa nyakenye.
UDkt Nkosazana Dlamini Zuma, owayebanga isikhundla sobumengameli we-ANC noRamaphosa kodwa wahlulwa, ngomunye wabantu okuke kwavela igama lakhe ukuthi angangena kulesi sikhundla ukuze kutshengiswe ubumbano i-ANC ehlale ikhuluma ngalo.
Kodwa umhlaziyi wezepolitiki, uMnuz Thabani Khumalo, uthe akangabazi ukuthi nguMabuza ozoba yiphini likamengameli wezwe.
Uthe uyiphini likamengameli we-ANC okuyisikhundla esingadingi ukuthi asebenze ngokugcwele ehhovisi.
“Uma kungafakwa uDD uzokwenzani? Kumele asule eMpumalanga ngoba awukwazi ukuphatha isikhundla esisemazingeni aphansi uma ujutshelwe kwesikazwelonke. Uma engafakwa lokho kuzodala inkinga enkulu,” kusho uKhumalo.
Uthe kumanje i-ANC izama ukulungisa indaba yokuthi amandla abe senhlanganweni ngakho kudingeka uMabuza abe kuhulumeni.
“Uma kungafakwa yena kuzoba nezinkinga ngokwepolitiki. Uma ubheka indlela i-ANC eyenza ngayo izinto nguyena okumele abe yiphini likamengameli wezwe,” kusho uKhumalo.
Uthe nangesikhathi sikaMnuz Thabo Mbeki, owayengumengameli we-ANC nowezwe, uMnuz Jacob Zuma wayeyiphini likamengameli wezwe.
Ebuzwa mayelana nokumeleleka kwabesifazane njengoba inhlangano ihlale ikhuluma ngokuthi kumele kube nokulingana kobulili kube ngu-50/50, uKhumalo uthe inkinga iqale engqungqutheleni yaseNasrec.
“Yinto okwakumele ilungiswe engqungqutheleni yaseNasrec leyo. Uma ubheka kwakhethwa isiqhoqho samadoda kwaba noyedwa wesifazane ngakho namanje kuhulumeni kuzoba indoda umengameli nenye indoda eyiphini likamengameli. Yinto okumele ilungiswe engqungqutheleni elandelayo ye-ANC le.”
Omunye umhlaziyi, uSolwazi Somadoda Fikeni, uthe ubona kungaba uNksz Sisulu noma uNkk Pandor abangajutshelwa kulesi sikhundla.
“I-ANC ihlazekile ngokuthi abekho abesifazane esikhundleni esiphezulu yingakho ubona nakumakomiti bezama ukubafaka. Kungenzeka naye uMabuza abe yiphini likamengameli. Angiboni kodwa uNkosazana (Dkt Dlamini Zuma) engangena ngoba babebanga noRamaphosa,” kusho uFikeni.
Ngakolunye uhlangothi uMnuz Xolani Dube, weXubera, uthe ubona uDkt Dlamini Zuma engaba yiphini likamengameli.
“I-ANC ifuna kube nobumbano, uma kufakwa uDlamini Zuma kuzobuya ukwethenjwa kwayo ngabantu abebebonakala beseka uZuma. Baningi nabantu abebeseka uMama (Dkt Dlamini Zuma) kuyiwa okhethweni njengoba uRamaphosa engamhlulanga kakhulu ngamavoti.” Uthe uMabuza wacela ukuhlala eMpumalanga kuze kuphele unyaka wezimali ngakho ubona ukuthi uma kuphela lesi sikhathi angajutshwa ahole imikhankaso yokhetho lwangonyaka ozayo.